हामी के हौँ ? - परिहास - नेपाल
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले रेल, पानीजहाजका ठूलाठूला कुरा गरेर मात्र हुन्न भन्ने टिप्पणी गर्दै सरकारसाग निहुा खोजेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै अधिनायकवादी डाक्टरले खानपिन छाडेर घुर्की लाउाछ भने त्यसमा हाम्रो के दोष ? के ससाना काम गर्न सरकारमा पुगेका हौँ ? त्यत्रो स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य लिएको हाम्रो सरकारलाई तुइनसुइनका झिनामसिना प्रश्नमा अल्झाउन खोज्ने ? रेल, मोनोरेल, पानीजहाजजस्ता ठूलठूला कुरा तपाईंजस्ता भूतपूर्वलाई के थाहा ? ससाना गफमा बानी पर्‍या पनि छैन, चासो पनि छैन ।